Tag: social media competitive research | Martech Zone
Tag: social media competitive research
Tsy ampy ny fihainoana. Ny paikadinao ara-tsosialy dia mila an'ireto singa 4 ireto hahomby!
Alakamisy, Aogositra 28, 2014 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Tiavo tanteraka ny hafatra eto amin'ny mpivarotra ambongadiny voalohany any Afrika atsimo Woolworths. Ny tonian-dahatsoratra nomerika Sam Wilson dia miresaka momba ny vokatry ny Socialbakers, Analytics ary Builder, ahafahan'ny ekipany mitondra fifamatorana marika ary hanome fomba fijery matanjaka eo amin'ny mpitantana orinasa. Ny paikadin'i Woolworth dia mihoatra ny fihainoana sy ny famaliana fotsiny amin'ny alàlan'ny media sosialy. Misy singa 4 hafa nolazain'i Sam izay nanampy azy ireo hahomby, na ivelany na amin'ny fitarihana anatiny. Fanadihadiana - fidirana amin'ny slice sy dice